Ngabe iProAir isebenza ngokushesha? - Izibuyekezo
Main > Izibuyekezo > Ukubuyekezwa komoya we-Pro - izixazululo zezinkinga
Ukubuyekezwa komoya we-Pro - izixazululo zezinkinga
Ngabe iProAir isebenza ngokushesha?
ProAirI-HFAizosebenzakungakapheli imizuzu futhi wenze ukuphefumula kube lula. Ngemuva kokusebenzisa umuthi wakho, ungazizwa ujittery.ProAirI-HFAkuyintoi-inhaler esheshayo (yokutakula).
Uyemukelwa kwenye inkulumo kaMedCram, sizokhuluma ngama-inhalers, ngakho-ke yini into esheshayo nengcolile ngama-inhalers? Lapha sine-bronchus okuyindlela ophefumula ngayo umoya futhi phakathi nendawo yimisipha ebushelelezi ekhawulela ukuvulwa noma ukukhanya kwento yale bronchus, lapho imisipha ebushelelezi izinkontileka i-lumen incipha futhi kukhona izamukeli ezimbili eziyinhloko esizibonayo emisipheni ebushelelezi . Sine-receptor ye-orange lapha esizoyibiza ngokuthi i-muscarinic receptor, ngakho-ke lokho kuzoba yi-M futhi kukhona enye i-receptor kuyo. Kulokhu sizoyibiza ngokuthi yi-blue receptor eyi-beta receptor.
Lawa ama-receptors amabili ayinhloko. Okwamanje kufanele wazi ukuthi ama-muscarinic receptors empeleni azodala ukusikwa okubushelelezi kwemisipha ukuqinisekisa ukuthi sivimbela ukuthi sifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi kukhona i-X enkulu esinama-inhibitor ale receptor muscarinic ohlangothini lwe-beta, kepha sifuna qiniseka ukuthi leso sigqoko esijabule noma sisebenze ngoba i-beta receptor empeleni iyayekisa leyo misipha ebushelelezi, futhi lokho kuzoholela ekuphumuleni. Ngakho-ke uma wazi lawa ma-receptors amabili futhi uyazi ukuthi ufuna ukuvimba i-muscarinic acid futhi uvuselele i-beta ukudala i-bronchodilation ngakho-ke ukhona manje okuwukuphela kwento okufanele uyazi mayelana ne-corticosteroid emuncu okushiwo ngayo lapha ukuthi yi-ICS futhi ngokuyisisekelo iya noma yikuphi lapho kungekho khona i-receptor yangempela, kepha okwenzayo ukuthi kunciphisa ukuvuvukala ngakho-ke izinhlobo ezintathu zemithi ongazisebenzisa ku-bronchi zingabaphikisi be-muscarinic ama-Beta agonists nama-corticosteroids ahogelwayo.
Kungani lokho kubaluleke kangaka? Hhayi-ke, ungazikhomba lezi zinhlobo ezahlukahlukene zemithi ngokuphela kwazo iSomuscarinic ihlala iphela ku -ium ngakho-ke yiziphi izibonelo ze-tiotropium ipratropium lesi sigaba esibizwa nge-glycopyrrolate ukuze ube ne-So-late, ngakho-ke uma ubona i-aniyamu noma i-alate kungumphikisi we-muscarinic, manje ohlangothini lwe-beta agonist, konke lokhu kugcina ku -ol ukuze wazi ukuthi i-formoterol salmeterol i-albuterol yenza zonke lezi zinto ku -ol manje? Uyazi uma kuyi-corticosteroid ehogelwayo, uzokwazi ukuthi njengoba iphela kokunye okufana ne-fluticasone noma i-mometasone njll, ukwazi ukuthi laba abathathu ungazihlanganisa ukuze sibe nabaphikisi be-muscarinic sinama-beta agonists futhi sine-corticosteroids emuncwe ngakho kanjani sizokusebenzisa lokhu maqondana nemiphumela yangempela yomtholampilo ake siyibheke ngakho-ke asiqhubeke futhi sibeke le mithi endaweni yalokhu kunezinhlobo ezimbili zama-agonists we-Beta kukhona into efana nama-agonists amafushane enza i-beta Ngizobiza njengoSaba, kulungile, ngakho-ke kumeleni lokho? Lokhu kumelela kanjani iProair? Lokho kubukeka sengathi iVentolin Albuterol ilungile, manje sesizokwenza amanye ama-agonists e-beta asebenza isikhathi eside, ngakho-ke yilaba, i-LABA bese siqhubeka sibheke abaphikisi be-muscarinic abasebenza isikhathi eside, kulungile bese sizobe ekugcineni qala futhi ubheke lawo Bheka ama-corticosteroids adonswe ngaphakathi -enye yilawa agcina ngo -ol futhi lawa agcina ngo -i. Khumbula, i-glycopyrrolate ikuleso sigaba futhi, ngakho-ke yi -ium -ol no -one, ngakho-ke kungani ngikufaka kuleli bhokisi elinamakamelo amathathu neSaba? Ngakho-ke sizobheka ukwelashwa kwe-COPD ne-asthma Kulungile, njengoba ubona ukuthi uma sibheka i-asthma, i-asthma yokuqala izoya kuleyo ndlela ngenkathi i-COPD izongena kulolo hlangothi ngakho into yokuqala yenza ngesifuba somoya uma ngabe sizofaka i-corticosteroid emonyiwe bese sibuza umbuzo ukuthi ngabe isiguli sisebenzisa i-beta ye-beta agonist emfushane uma impendulo iba kanye noma kabili ngesonto lapho-ke siyaphila ukuthi sizothathwaphi isidakamizwa kepha uma isiguli ukuyisebenzisa i-beta agonistas esebenza okwesikhashana i-inhaler ephuthumayo kathathu noma ngaphezulu ngesonto ku-asthma bese i-corticosteroid ehogelwayo ayanele Bese kufanele sengeze i-beta agonist esebenza isikhathi eside Kuleli qophelo siphinde sibuze ukuthi ngabe isiguli sisifushane yini i-beta agonist noma i-albuterol esebenza kathathu noma ngaphezulu ngesonto Uma impendulo inguyebo, kusho ukuthi isiguli asilawulwanga kahle futhi asisodwa nje ku-Add halative corticosteroid kanye ne-beta ye-beta esebenza isikhathi eside kodwa okwamanje engeza i-muscarinic esebenza isikhathi eside umphikisi Yonke iphuzu lapho w buza lo mbuzo ukuthi isiguli sisebenzisa i-beta esebenza njenge-agonist emfushane futhi impendulo ayiyona izikhathi ezingama-zero ngesonto okusho ukuthi isiguli silawulwa kahle kangangoba akudingeki sisebenzise i-inhaler yokutakula, okusho ukuthi singayeka sisebenzisa abaphikisi be-muscarinic abasebenza isikhathi eside uma sithatha lokhu noma uma sithatha nje i-corticosteroid ehogelwayo emaphashini, ngicabanga ukuthi ama-beta Agonists, lapho-ke singakwazi ukulahla i-beta agonist ende futhi sithathe i-corticosteroid emuncu, ngakho-ke sibonani? I-e is up or down kuye ngempendulo yokuthi i-beta-acting beta agonist isetshenziswa kangaki Qaphela ukuthi uma une-asthma, awusoze usebenzise i-agonist ye-beta esebenza isikhathi eside ngaphandle kwe-corticosteroid ehogelwe kwenye i-COPD uma une-COPD Isidakamizwa sokuqala engingangeza yisiphikisi esisebenza isikhathi eside se-muscarinic ngakho-ke i-tiotropium noma i-umeclidinium noma i-glycopyrrolate bese ngizobuza isiguli ukuthi isiguli sisebenzisa i-agonist emfushane yokwenza i-beta uma impendulo inguyebo kathathu noma ngaphezulu kweviki bese ngingeza ku ama-beta agonists asebenza isikhathi eside ukuthi into yokugcina engizoyisebenzisa esigulini esine-COPD yi-corticosteroid emuncwe ngakho-ke lokhu kubaluleke kakhulu izinto zokuqala esizosebenzisa isiguli esine-COPD, kepha sihlala sibuza umbuzo futhi kufanele ubone ngokucacile lapha ukuthi noma ngubani onesifo samaphaphu lapha, kungaba i-asthma noma i-COPD, ama-beta agonists azosebenza njenge-inhaler yokutakula, kulungile, manje usuyabona ukuthi kwesinye isikhathi uzobe usebenzisa inhlanganisela yemithi. Izinkampani ezidayisa izidakamizwa azizona izilima ngokwazi ukuthi imvamisa umuthi owodwa akwanele, ngakho-ke ozokubona nge-COPD ukuthi ubona le nhlanganisela yama-llama-llama futhi uyakubona lokho ngaso sonke isikhathi.
Ngakho-ke uma uthatha i-inhaler futhi iyinhlanganisela yezidakamizwa ungabheka lapho bese ubona ukuthi inenhlanganisela ye -ium-drug ne -ol-drug ngokwesibonelo umuthi iVilanterolUmeclidinium futhi lokho kungaba yinhlanganisela yeLama-Laba, ngoba uyazi leli thebula, uzokwazi ukuthi lo muthi umuthi osetshenziselwa i-COPD, ake ngikunikeze omunye owaziyo ukuthi ohlangothini lwesifuba somoya, abantu bahlanganisa ama-corticosteroids ahogelwayo nama-agonists asebenza isikhathi eside. Ngakho-ke uma ubona okuthile okufana ne-fluticasone ne-salmeterol leyo nhlanganisela iyahlangana futhi i-Hat'sforms advair ngokwesibonelo futhi lokho kungaba i-corticosteroid-alaba combo ehogelwayo. Manje usungathola uLaba yedwa Ungathenga i-salmeterolor formoterol wedwa, kepha lokho kuya ngokuya kuncipha ngoba njengoba ubona ukuthi ngizisetha kanjani izinto lapho uzothatha i-laba uzolibhangqa ne-corticosteroid ehogelwayo uma ususa i-asthma , noma uzoyibhangqa nomphikisi osebenza isikhathi eside we-muscarinic uma une-COPD manje Yelapha ngokusemandleni akho Cabanga ukuthi ngeke kube yisikhathi futhi usuvele uqalile ukusebenza kuyo yonke le mithi emithathu koyedwa, ngakho-ke manje wena angabheka noma iyiphi i-inhaler ngokusobala ukuthi hlobo luni lomuthi nokuthi luyini ukuze lusetshenziswe futhi manje usungabona neziguli zakho ukuthi ziyakhuphula noma zehlise yini ukwelashwa kwesifuba somoya, uma ngiyeka ukuthatha i-corticosteroid ehogelwayo futhi lokho akusebenzi ngizofaka i-beta agonist esebenza isikhathi eside kepha kukhona okuhlukile uma, ngokwesibonelo, nginesiguli esine-atrial fibrillation futhi ngikhathazekile ukuthi izinga lokushaya kwenhliziyo yami lishesha kakhulu Esikhundleni sokungeza i-long- osebenza nge-beta agonist ongasheshisa inhliziyo yakho, ngiyakwazi ukukhetha e ukukhulisa umthamo we-corticosteroid ehogelwayo kusuka phansi kuya kokuphakathi, noma umuthi onamandla amakhulu.
Ngingasebenzisa futhi i-leukotriene receptor antagonist engeza, futhi angikufakanga lapha, kepha ngizokubeka ekhoneni lapha leukotriene receptor antagonist futhi yilolo hlobo 4, kulungile lezi ezinye izinto okufanele ucabange ngazo kepha lena yiModality eyodwa ozoyibona ekwelashweni phakathi kwesifuba somoya neCOPD, ngiyabonga ukuxhumana kwakho nathi kuvaliwe
Ngabe iProAir ibala iye phezulu noma phansi?
Umthamocounter kuzobalwa phansiisikhathi ngasinye sokufafazakuyintokukhishwe. Lapho umthamocounterifinyelela kuma-20, umbala wezinombolokuthandashintshela kokubomvu ukukhumbuza isiguli ukuthi sixhumane nosokhemisi waso ukuze baphinde bagcwalise imishanguzo noma babonane nodokotela wabo ngokugcwaliswa kadokotela.
Ingabe ilungele ini iProAir?
ProAir(i-albuterol sulphate) i-bronchodilator ethambisa imisipha ezindleleni zomoya futhi inyuse ukugeleza komoya uye emaphashini asetshenziselwe ukuvimbela nokwelapha ukuphefumula nokuphefumula okubangelwa izinkinga zokuphefumula njengesifuba somoya kanye nesifo samaphaphu esingamahlalakhona.ProAiribuye isetshenziselwe ukuvimbela isifuba somoya esibangelwa ukuzivocavoca.
(Umculo wokwethula) Kulungile, oh. Angibonanga nina lapho. Sawubona! Ngicabanga ukuthi kufanele ngabe ngikhuluma ngalolu chungechunge lwegundane lweRoccat Kone Pro olusanda kuphuma namhlanje, futhi belulokhu lutholakala ngoku-oda kusengaphambili kusukela ngesonto eledlule noma kunjalo, futhi kungenzeka ukuthi ungibonile ngisemfudlaneni futhi Kepha namhlanje sizonikeza wena umbono wami ogcwele ngeRoccat Kone Pro nePro Air Wireless.
Ngakho-ke, iRoccat Kone Pro izobe ithengisa ngo- $ 80, kanti iKone Pro Wireless izobe ithengisa ngo- $ 129, okuyimali encane ku-WiFi. Njengo- $ 50
Ngisho ukuthi lokho kuhle kakhulu. Kepha wonke umuntu uyakwenza. Ake sikhulume ngomehluko phakathi kweKone Pro nePro Air.
Ngakho-ke iPro Air ngokusobala ayinantambo, inesisindo esingama-gramu angama-75, ngithanda ukusho ukuthi isisindo sayo sincane esikalini sami. Manje senginezisindo zombili esibukweni ukuze uzitholele umqondo. Kepha ngaphandle kwesisindo, iKone Pro Air nayo inechweba le-USB lokushaja, i-G Pro engenantambo neViper Ultimate engafiki ne-USB Type-C.
Ziza ne-USB micro. Okungenani ngiyakwazi ukudlula kwiViper Ultimate ngoba iza nesiteshi sokushaja. Uma ufuna le nketho cishe ngentengo efanayo ezungeze u- $ 130.
wokugaya ukudla umjikelezo
Futhi-ke, i-G Pro, kuhle, kufanele uthenge iDokodo ngokwehlukana, ngakho-ke bheka ukuthi yini? $ 50 +. Izindleko zemikhumbi, uma ufuna ichweba, noma usebenzisa ikhebula le-USB nje. Kepha impilo yebhethri le-G Pro yinde impela.
Futhi impilo yebhethri yeKone Pro Air ngokuthembeka yinde kakhulu. Ngixhume leli gundane selokhu ngalikhipha ebhokisini. Angizange ngibheke impilo yebhethri futhi ngiyisebenzise ne-RGB futhi.
Futhi iPro Air ingasetshenziswa zombili kwimodi ye-Bluetooth nange-dongle engenantambo, nayo enendawo yokubeka ngaphansi kwegundane, enhle impela. Ngakho-ke uma ufuna ukudlala usohambeni, ngincoma kakhulu ukuthi ulethe le dongle nawe bese uyigcina ezansi kwegundane lakho. Kepha uma uyisebenzisela kuphela umsebenzi wasehhovisi nokunye, ungavele usebenzise le modi ye-bluetooth futhi ungashiya i-dongle ekhaya.
Kepha-ke i-dongle ikunikeza ukuxhumana okusheshayo futhi okuhle kakhulu uma udlala ngoba kusobala ukuthi kungaba nokuphazamiseka ngezikhathi ezithile lapho usebenzisa i-bluetooth, ikakhulukazi uma une-Airpods nefoni nazo zonke izinhlobo zamadivayisi we-bluetooth afaka ukuphazamiseka okwengeziwe. Ngingavele ngisebenzise imodi ye-bluetooth, futhi kwimodi yehhovisi noma ukuntweza phezu kwamanzi noma yini. Vele usebenzise i-dongle ukudlala.
Omunye umehluko phakathi kweProand The Pro Air ukuthi iPro iza nesethi eyengeziwe yeziketi ebhokisini lapho iPro Air ingekho khona. Lokho kungenye into okufanele uyazi. Iziketi kuzo zombili amagundane yilezo ezinyaweni eziphathwa ukushisa ze-PTFE engicabanga ukuthi mhlawumbe ezinye zezinyawo ezinhle kakhulu zamagundane c Lezi zingcono kunezinyawo zikaG Pro, zingcono kunezinyawo ze-Viper Wireless, zingcono kuneModeli O Izinyawo ezingenantambo hhayi indoda.
Lezi zinyawo zeRoccat muhle impela. Noma yini oyenzayo ngale PTFE ephethwe ukushisa, ngifuna ukuthi uqhubeke nolayini wakho wonke wegundane kusukela manje kuqhubeke. Amagundane eza nekhebuli yeRoccat Phantom Flex nayo enhle impela.
Mhlawumbe ingenye yezintambo ezingcono laphaya. Ngingasho ukuthi kuhambisana neXtrfy Easy Cable futhi ifana nekaBurst Pro nayo. Akudingeki ngokuqinile ukuyiguqula bese uyishintshela ipharakhodi ye-aftermarket, kepha nakanjani ungakwenza.
Ngizoshiya izixhumanisi kwezinye zezinkampani engizithandayo encazelweni engezansi ukuze uhlole ukuthi uyafuna yini. Kodwa le khebula inele ngokwanele ukuyigcina esitokweni ngaphandle kokuthi ufuna i-aesthetics noma ukuguquguquka okuthe xaxa. Isondo lokuhambisa empeleni lenziwe nge-aluminium.
Bayibiza ngeTitan Wheel Pro entsha. Futhi ngokwethembeka izwakala ngathi ipulasitiki, kepha ngicabanga ukuthi kunamabanga ahlukile namamaki e-aluminium ukuze ngibone ukuthi ngingayiphutha kanjani ngepulasitiki.
Futhi ngokuyisisekelo bathe ingahle ivumelane nezinga lokushisa lomunwe wakho ngakho-ke izwakala ingokwemvelo nokuthi yini. Yebo, izwakala ngokwemvelo njengeplastiki, okungeyona into embi. Kepha isondo lokuhambisa nalo lihle impela.
Iqinile impela, futhi ithinta kakhulu uma ucindezela izinkinobho ezintathu kwigundane. Ngokwami ​​ngicabanga ukuthi ukungezwani kulungile. Uma uthatha isinyathelo ngesondo lokuhambisa, lichazwa kahle, kepha futhi libushelelezi ngokweqile, okuyilokho kanye okufunayo ekukhiqizweni kanye nasekudlaleni.
Kunembile impela. Futhi omabili amagundane eza nokushintshwa kwe-titanium optical. Futhi ngasizathu simbe, lezi zinguquko ze-titanium optical zizizwa zikhanya kancane kunokushintshwa okubonakalayo ku-Burst Pro.
Ngizosho ikakhulukazi ngemuva kokusebenzisa i-G Pro Superlight isikhathi eside ngisebenzisa lawo ma-Omron 20mils angukuchofoza okulula impela bese ubuyela eBurst Pro, noma ngabe ngiyasithanda isimo futhi sisalinde iBurst Pro engenantambo, noma thanda ukwakheka, ukuchofoza kweBurst Pro kuqinile. Futhi ngokuqhathanisa ngqo neKone Pro neKone Air, lokhu kuchofoza kuzwakala kulula kancane. Futhi azinzima kangako ukukhama njengakuBurst Pro.
Ngakho-ke angazi noma ngabe i-placebo nje njengoba la magundane amabili emisha sha futhi iBurst Pro yami igqoke kakhulu noma yini, kepha noma kunjalo bengingathanda ukuthi i-voltage ekushintsheni kwe-titanium optical isondele kancane ku-Omron ukuze bazizwe ilula kancane futhi kulula ukuyikhama. Manje sengizosho ukuthi ngeKone Pro neKone Air ngiyakwazi ukwenza ukuchofoza kwegundane ngokushesha nangempumelelo, ngakho-ke anginankinga nalokho, kepha bengizobakhetha uma bebekhona ilula kancane. Ngakho-ke asiqhubeke sikhulume ngokuma kweKone Pro nePro Air, ngakho-ke lokhu kuyigundane le-ergo, futhi kuhle kakhulu ngezitayela eziningi zokubamba ezihlukile.
Ngakho-ke uma ufuna ukuyisebenzisa njengomunwe womunwe, ufuna ukuyisebenzisa njengesundu, ufuna ukuyisebenzisa njengozipho, uyakwazi kakhulu ukukwenza kalula. Noma ngabe yisiphi isizathu, njengalesi sakhiwo kubukeka kuyinto exakile. Kepha uma ubamba igundane, ungenza kakhulu noma yiluphi uhlobo lokubamba olifunayo.
Futhi ngizoba owokuqala ukukutshela ukuthi leli gundane liqondiswe kakhulu kubantu abanezandla ezinkulu. Lokhu nakanjani kuyigundane elilingana nelikhulu. Angicabangi ukuthi kukhona igundane le-XL laphaya, kepha liyigundane elihle kakhulu.
Futhi lo ngumkhiqizo wokuqala weRoccat Kone engake ngawuzama, ngakho-ke lokhu kungukuhlangenwe nakho kwami ​​kokuqala ngaleli fomu futhi bekungijabulisa kakhulu futhi. nganoma yisiphi isizathu ngihlala nginomuzwa wokuthi nginezimpuku ezimbili eziyinhloko ngasikhathi sinye. Angazi kungani.
Kufana nokusuka esikhathini eside ngingenayo into esemqoka ngoba ngivivinya kakhulu, ngiye kwimikhiqizo emibili ebengiyisebenzisa njalonjalo, iRoccat Kone Pro Air nakanjani ingenye yalezo zigundane. Ngidlala kahle kanjani ngale nto. Le nto ilula kakhulu ukuyisebenzisa ngesikhathi sokukhiqiza.
Kukhona okuthile ngakho okuhle nje futhi kumnandi. Njengokungathi kulula kakhulu. Angazi ukuthi ngingachaza kanjani futhi.
Kufana nesilinganiso esifanele sezandla eziphakathi nezikhulu. Ngabe ngifisa ukuthi kube lula kancane? Yebo. Ngisho ukuthi lokho kungaba kuhle ngicabanga? Kepha uma bengifuna nje elula kuphela ngingavele ngihambe nenguqulo enezintambo ngoba leyo enentambo ifana ne-65g / 66g.
Angazi. IKone Pro Air yinhle impela. Lokhu kufana negundane lami lesibili eliyintandokazi elingenantambo.
Kepha i-G Pro Superlight ilungile ngemuva kwesikhashana, ikakhulukazi uma usebenzisa ikhompyutha ngokujwayelekile futhi ungadlali midlalo. Lapho ufuna ukuphumuza sonke isandla sakho kwigundane futhi ufuna ukuphumula. Ngemuva kwesikhashana, kuyakhathala ngoba akwenzelwanga ukugcwalisa sonke isandla sakho njengoba kwenza uKone.
Isigaxa, ngingasebenzisa leli gundane amahora. Sengiqedile ngekhompyutha, isandla sami asilimazi. I-G Pro, indaba ehlukile.
IViper incane kakhulu kimi, ngakho-ke ngiyibona cishe ngokushesha ngenkathi idlala, ngoba igundane elivela ochungechungeni lweViper lincane nje kimi. Ukube benginezandla ezincane, ngicabanga ukuthi iViper nayo ilungile. Okufanayo kuya kuModeli O.
IModeli O inkudlwana kuneViper, kepha ayinkulu njengeG Pro. Nginomuzwa wokuthi lolu chungechunge lweKone Pro luzodlala lapha, ngesisindo esilingana kakhulu nawo womathathu la magundane, futhi lukhulu futhi lukhululeke kakhulu. Lokho kuhle kakhulu engikushoyo.
Anginakho okunye engingakusho. Kuhle impela. Lokhu kungenye yezinto zami ezintsha zamandla.
Ngizokwengeza lokhu ohlwini encazelweni yami nazo zonke amagundane engiwathandayo. Ngoba ukuthembeka, uma bengingenayo i-G Pro Wireless ne-Kone Pro Air, angicabangi ukuthi ngizozizwa ngiphoqelekile ukuthi ngithenge ne-G Pro Wireless nayo. Ngakho-ke uma ufuna igundane elikulungele ngempela ukudlala futhi ukuthi umkhiqizo ohambeni muhle impela, ngincoma kakhulu ukuhlola uchungechunge lwamagundane eRoccat Kone futhi uzibonele lokho okucabangayo.
Kepha yilokho kuphela enginakho ngawe. Uma unemibuzo, zizwe ukhululekile ukuyibhala esigabeni sokuphawula ngezansi. Ngaphandle kwalokho sizokubona esihlokweni esilandelayo.
Siyabonga ngokubuka. Ungakhohlwa ukungilandela ku-Twitter. Sizokubona ngokulandelayo.
Kwenzekani uma usebenzisa iProAir ngokweqile?
Isebenzisa kakhululo muthi uzokwandaeyakhoubungozi bemiphumela emibi (engase ibulale).Uma ukukhonausebenzisalo muthiukugwema isifuba somoya esilethwa ukuzivocavoca, donsa njengoba uqondisweeyakhoUdokotela, imvamisa 2 uyakhukhumeza 15ukuImizuzu engama-30 ngaphambi kokuzivocavoca.
Iya noma yikuphi namuhla uzobona i-Apple AirPods ilenga ezindlebeni zabantu. Lezo zindlebe ezingenazintambo seziwuphawu lwesimo, ngiqonde ukuthi, ngubani odinga ngempela ukufunda ukufaka ikhodi lapho uvele uxhume ama-earbuds amabili ne-bam! Usebenza kwezobuchwepheshe manje. Yize lezi zindlebe njengamanje zidinga ukukhishwa ukuze zikhokhiswe, i-Apple isheshisa ukushaja okungenantambo.
Manje kuzokwenzekani uma ungakaze uthathe ama-AirPod akho? Okokuqala, udinga ukuthola indlela yokubenza banamathele ezindlebeni zakho. Lokhu kungenxa yokuthi owesilisa ogama lakhe linguBen Hsu usanda kuzumeka nama-AirPod akhe futhi wavuka nge-beep esiswini sakhe. Wayekugwinyile elele.
Ngiqonde ukuthi, lobu ubufakazi obungaziwa ukuthi, ngokumangazayo, ama-AirPod angamelana ne-acid esiswini, ene-pH enamandla engu-1.7. Wagijima waya kudokotela owamtshela ukuthi 'alinde nje'. lingena emathunjini akhe, ikholoni, ekugcineni ingquza yakhe.
Empeleni, uhlelo lokugaya ukudla lwalusebenza kahle kakhulu ekuhlukaniseni i-AirPod nezakhamzimba uqobo lwazo ukuthi ama-headphone aphume ngokuphelele futhi aqhubeka nokusebenza nama-AirPod emgwaqweni, khumbula nje, angahle aphume esinqeni sakho. Abantu abaningi bacabanga ukuthi ukushiya ama-AirPod ngemuva kungaholela ekwakhiweni kwe-wax, kepha empeleni lokho akulona iqiniso. I-wax yendlebe yenzeka lapho izinto ezinjenge-swab kakotini zibhajwe ngaphakathi nangaphandle kwendlebe.
Nakhu empeleni isikhuni esishisayo sikakotini: ungasebenzisi ukotini swabs. Babangela i-wax yendlebe. Kulesi 'simo sokuqagela', uzoshiya ama-AirPod endlebeni yakho futhi ungalokothi uwakhiphe.
Ukwakhiwa kwe-wax yendlebe bekungeke kube yinkinga. Kepha okungaba yinkinga ukuzwa kwakho ngempilo yethu esemoyeni, okuyindlela yokudlulisa umsindo. Ngenxa yalokhu, izindlebe zethu ziguquke zaba yilokho manje esikubiza ngokuthi abaguquli.
I-transducer yinoma yini eguqula amandla asuke kwesinye isimo aye kwesinye. Izinto ezidlidlizelayo zikhiqiza amandla ngendlela yamagagasi omsindo, futhi lapho igagasi lomsindo lifinyelela endlebeni yakho, libangela indlebe yakho ukuba idlidlize ngokomzimba. Lokhu kudlidliza komzimba kuhambisa izinwele endlebeni yakho, okuholela emasiginali kagesi e-neural adluliselwa ebuchosheni bakho.
Ngakho-ke ungezwa konke, noma yini evela kuma-AirPod akho, njengomculo noma isizini 1 ye-podcast yethu 'SIDENOTE
Ingabe i-ProAir iyi-steroid?
Proairi-bronchodilator kanti i-Symbicort iyinhlanganisela ye-i-steroidkanye ne-bronchodilator esebenza isikhathi eside.
Ingabe kubi ukusebenzisa i-inhaler engenalutho?
Sebenzisa i-Inhaler engenalutho
Ngoba okunye okukhazimulayo kuhlala esitsheni ngemuva kokuphela komuthi, ungahle ungakwazi ukusho ukuthi yini ophefumulela kuyo. Abanyeama-inhalersube nekhawunta yokulandelela ukuthi kushiywe imithamo emingaki.
Ingabe iProAir inayo i-steroid kuyo?
Ngabe iProAir inyusa umfutho wegazi?
Ukwesaba, ukuthuthumela (ukuthuthumela), ikhanda, ukoma komlomo / umphimbo noma ukucasuka, ushintsho ekunambithekeni, ukukhwehlela, isicanucanu noma isiyezi kungenzeka. Uma enye yale miphumela iqhubeka noma iba yimbi, tshela udokotela noma usokhemisi ngokushesha. Lo muthi ungahlephakamisaeyakhoukushaya kwegazi.
Ingabe iProAir ikwenza ukhuluphale?
IMP: CHA. I-inhaler yakho iqukethe umthamo ophansi kakhulu we-steroids ukuthiitngekekukwenzeFakaisisindo. Kwesinye isikhathi amaphilisi e-steroidkungakwenzauzizwe ulambile, futhi udla kakhulu intandokukwenzeqala kuukukhuluphala. Izibhebhe ngokwazo azenzikukwenze uzuze, ngakho-ke yidla amanani akho ajwayelekile ngenkathiwenabathathe futhiwenakufanele kube kuhle.
Ingabe iProAir ingadala ukuzuza kwesisindo?
IMP: CHA. I-inhaler yakho iqukethe umthamo ophansi we-steroids ongeke ukwenze ukugqokeisisindo. Kwesinye isikhathi amaphilisi e-steroidcankukwenze uzizwe ulambile, futhi ukudla okuningi kuzokwenza uqaleukukhuluphala. Izibhebhe ngokwazo azikwenziinzuzo, ngakho-ke yidla amanani akho ajwayelekile ngenkathi uwathatha futhi kufanele uhambe kahle.